मुख्य गरी अमेरिका, क्यानडा, अष्टेलिया, युके, विभिन्न युरोपियन देशहरु, जापान, चीन भारत लगाएतका धेरै देशहरुमा नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्नको लागि गएको पाइन्छ । आज हामी तपाईलाई यस्ता ५ कुराहरु बताउन गइरहेका छौं जसलाई विदेश पढ्न जान भन्दा पहिले विशेष ध्यान दिनुहोस्
१. कहाँ पढ्ने ?
धेरै देशहरु यस्ता छन् जुन राम्रा राम्रा विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुको लागि प्रख्यात छन् । त्यसैले नेपाल बाहिर कुनै देशमा पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने सहि देश छान्नुहोस ।
देश यस्तो हुन पर्छ जसले तपाईको आवश्यकता पुरा गर्न सकोस र राम्रा शिक्षाको लागि तपाईको मनोबल बढाउन सकोस् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहनुभएको विषयको राम्रो सँग पढाइ हुने देश छान्नुहोस् ।
२. जाँच बुझ
आफु जाने देश छानी सकेपछि कुन विश्वविद्यालय वा कलेजमा पढ्न ठिक हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुहोस ।
तपाई विदेशमा पढ्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले उक्त विश्वविद्यालय वा कलेजको राम्रो सँग जानकारी लिनुहोस ।
विभिन्न देशहरुमा कैयौं पटक केही यस्ता नक्कली संस्थाहरु पनि भेटिएका छन्, जसले विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न प्रकारको प्रलोभन देखाएर आफ्नो देशमा बोलाएर सोझा विद्यार्थीहरुलाई ठगेका छन् वा फाइदा उठाएका छन् । त्यसैले जानुभन्दा पहिले विभिन्न स्रोतहरुको उपयोग गरेर राम्रोसँग जानकारी लिनुहोस् ।
३. पढ्नको लागि लाग्ने खर्च र छात्रवृत्ति
विदेश पढ्न जान पहिले विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयको शुल्क र पढ्न जान लाग्ने अन्य खर्चको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अधिकांश विश्वविद्यालयले बाहिरबाट आउने राम्रा र जेहेन्दार विद्याथीहरुलाई छात्रवृत्तिको रुपमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्छन् ।
तर, कुनै विश्वविद्यालयले यो सुविधा दिँदैनन् । यसैले विदेश जान भन्दा पहिले विश्वविद्यालयबाट यो कुराको पुरै जानकारी लिनुहोस कि त्यँहा छात्रवृतिको सुविधा छ कि छैन् । यसले तपाईको धेरै खर्च बढ्न सक्छ ।
४. जागिरको ग्यारेन्टी
कैयौं विश्वविद्यालयले अनुभवी र होनहार विद्यार्थीहरुलाई पढाई सकिने बित्तिकै जागिर दिन्छन् ।
यतिमात्रै होइन उनीहरुले फोन, इमेलमा या विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेर विद्यार्थीहरुलाई सहि कोर्स तथा करियर छान्न पनि मद्धत गर्छन् । विदेश जानु पहिले विद्यार्थीहरुले यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
५. भिसाको लागि उचित व्यवस्था
यदि तपाई विदेश पढ्न जान लाग्नु भएको छ भने तपाईलाई भिसाको आवश्यकता हुन्छ । यस कुरालाई सुनिश्चित गर्नुहोस कि जति वर्षको लागि तपाई पढ्न जान लाग्नु भएको छ त्यस समयमा तपाईलाई भिसाको सम्बन्धमा कुनै समस्या नहोस ।
यस बाहेक भिसाको लागि चाहिन सबै खालका आवश्यक कागजपत्रहरु पनि समयमै बनाउनुहोस । यसमा ढिलाई हुनाले तपाईलाई समस्यको सामना गर्न पर्ने हुन सक्छ ।